Wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay oo la bedelayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay oo la bedelayo
MAREEG 21 November 2015 23 November 2015
Ergeyga gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Danjire Nicholas Kay ayaa lagu wadaa in bisha soo socoto la bedelo, waxaana Danjiruhu uu dhameystay labo sano oo uu wakiil uga ahaa Soomaaliya Qaramada Midoobey.
Danjire Kay ayaa waxaa u dhamaatay muddo labo sano ah oo ah waqtiga loogu tala galay Mas’uulka hogaaminaya howl galka Qaramada Midoobey ee Soomaaliya, iyadoo horay lix bil oo dheeraad ah loogu daray.
Nicholas Kay ayaa maalmahan safaro ku marayay gobolada dalka, si uu u sagootiyo, waxaana uu kula kulmay magaalada Garowe Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas iyo Madaxweynihii hore ee Puntland C/raxmaan Faroole.
Madaxweyniyihii hore ee Puntland C/raxmaan Faroole ayaa sheegay inay jeclaan lahaayeen in Danjire Nicholas Kay uu la sii joogo, inta uu ka dhamaanayo sanadka 2016, maadaama uu xusay inuu xog ogaal u yahay barnaamijka geedi socodka siyaasada ee sanadka soo socda la doonayo in doorasho dalka ka dhacdo.
Danjire Nicholas Kay ayaa lagu wadaa inuu bedelo nin ay isku wadan yihiin, kaasoo aan wali la soo magacaabin, waxaana loo badinayaa inuu noqdo Diblomaasi British ah oo horay uga soo shaqeeyay dal Afrikaan ah.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey Ban Ki-moon ayaa 29-kii bishii April sanadkii 2013 magacaabay Danjire Nicholas Kay, waxaana uu bedelay danjirihii ka horeeyay Ausgutine Mahiga oo u dhashay dalka Tanzania.
Alhuda Cibe has long term vision for East African Islamic Finance Market.